Fampianarana: efa mianatra ny sekoly tsy miankina | NewsMada
Fampianarana: efa mianatra ny sekoly tsy miankina
Nanomboka tamin’ity herinandro ity, efa hita miverina an-dabilio ireo mpianatra amin’ny sekoly tsy miankina sasantsasany eto Antananarivo. Roa volana alohan’ny fotoam-pidirana nalahatry ny fanjakana isika izao.
Efa nampiato ny fampianarana tamin’ny volana jona ireo sekoly miverina mianatra amin’izao fotoana izao ireo. Tsy niaritra grevin’ny mpampianatra sy ny sakantsakana maro fa nahavita hatramin’ny farany ny fandaharam-pianarana.
Tsy manaraka ny tetiandro omen’ny fanjakana izy ireo fa mampianatra amin’ny fotoana efa nalaminy sy heveriny hahamety ny mpianany hatrany.
Etsy andaniny, mbola misy ny mpianatra ao anatin’ny fanaovana fanadinam-panjakana BEPC. Ny sasany, mbola eo am-panomanana ny fanadinana bakalorea.
Raha ny tetiandrom-pianarana navoakan’ny fanjakana ho an’ny taom-pianarana 2018-2019, hanomboka amin’ny 19 novambra izao ny fidiran’ny mpianatra an-tsekoly manerana ny Nosy. Ny 5 novambra ny fidiran’ny mpandraharaha sekoly ary ny 12 novambra ny fidiran’ny mpampianatra.
Hizara dimy ny fotoam-pampianarana ka hanomboka ny 19 novambra ka hatramin’ny 21 desambra ny roa volana voalohany. Fialan-tsasatry ny Krismasy aorian’izay. Hiditra ny 7 janoary hatramin’ny 1 marsa indray ny roa volana faharoa. Aorian’izay, ny 4 marsa hatramin’ny 19 avrily. Tsy hifarana ny taom-pianarana raha tsy ny faran’ny volana aogositra 2019.
Mbola betsaka ireo sekoly tsy miankina misalasala amin’ny fanarahana ity tetiandrom-pianarana ity satria samy hanavao izany avokoa na ny mpianatra na ny mpampianatra.